Diyaarad Ay Leedahay Shirkad La Shaqaysa AMISOM oo Ku Dhacday Garoonka Aadan Cadde – Radio Daljir
May 30, 2017 9:35 b 0
Waxaa goordhaw garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kusoo dhacday Diyaarad ay leedahay shirkadda Bancroft, oo ah Shirkad qaabilsan la talinta howlaha amaanka iyo tababarada Ciidamada Midowga Afrika AMISOM ee jooga Soomaaliya.
Diyaarada markii ay ka duushay garoonka dareentay cilad waxa ayna isku da day in ay caadi usoo degto balse ku guul dareesatay , waxa ayna mudo daqiiqado ah ku dul heehaabeysay garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde, iyadoona kusoo wargalisay maamulka garoonka in cilad ay jirto.
Garoonka Diyaaradaha ayaa lagu diyaariyay gaadiidka dab damiska iyo kooxaha gurmadka si ay ula tacaalaan Diyaaradan hadii ay soo dhacdo, waxaana Diyaarada mudo kadib lagu amray in ay isku daydo in garoonka kasoo degto.
Diyaaradan oo la sheegay markii ay garoonka ka duushay ay dareenay cilad ayna u bixi waayeen lugaha ayaa markii ay soo degtay ku bur burtay dhabaha ay diyaaradaha ku ordaan, waxaana Diyaarada qeybo kamid ah gaar ahaan baalasha kasoo gaaray bur bur xoogan.
Nabadoon Raare oo Taageeray Kordhinta Barlamaanka Puntland (dhegayso)